नुवाकोटमा बस दुर्घटनाः तीन जनाको मृत्यु, ५५ घाइते, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नुवाकोटमा बस दुर्घटनाः तीन जनाको मृत्यु, ५५ घाइते
तस्विर रामहरी न्यौपानेको सहयोगमा
नुवाकोट । नुवाकोटको समुन्द्राटारबाट त्रिशूलीतर्फ जाँदै गरेको मिनीबस आज सूर्यगढी गाँउपालिका–५ गणेशस्थानमा दुर्घटना हुदाँ तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा ५५ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परी नुवाकोटको पञ्चकन्या गाँउपालिका–४ थप्रेकका २८ वर्षीया मिनु तामाङ र ५९ वर्षीय भगवान कडेंल तथा चितवन स्थित मुग्लिङका ५६ वर्षका बलराम तिवारी रहेका छन् ।
नुवाकोट प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुंवरको अनुसार तामाङ र तिवारीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको र कंडेलको उपचारको क्रममा काठमाडौ स्थित ग्रिनसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
नुवाकोटको राउतवेसीबाट त्रिशुली आउदै गरेको बस शुक्रबार बिहान दुर्घटनामा परेको हो । गम्भीर घाईतेहरुलाई उपचारका लागी काठमाडौंको ग्रान्डी र ग्रीनसिटि अस्पताल ल्याईएको छ अन्य घाईतको त्रिशुली अस्पतालमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बा १ ख ६३५६ नंको बस दुर्घटनामा बसका चालक र सहचालक समेत घाईते भएका छन् । गणेशस्थानको फेदी खोलामा आइपुग्दा बस अनियन्त्रित भएर १५० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । बसमा ५० भन्दा बढी यात्रु सवार रहेको जनाइएको छ । घाईतेहरुले बसमा क्षमताभन्दा बढि यात्रु रहेको र तिव्रगतिका कारण दुर्घटना भएको बताएका छन् ।